Madaxweynaha Turkiga oo mas’uuliyadda dilkii Kashowqi ku eedeeyay madaxda Sacuudiga – Bandhiga
Madaxweynaha Turkiga oo mas’uuliyadda dilkii Kashowqi ku eedeeyay madaxda Sacuudiga
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa markii ugu horraysay waxaa uu Boqortooyada Sucuudiga si toos ah ugu eedeeyay dilka weriye Jamaal Khaashuqji.
Erdogan ayaa yiri “Waxaannu ognahay in amarka lagu dilay Khaashuqji inuu ka soo baxay madaxda ugu sarreysa ee dowladda Sucuudiga,” waxa uu ku qoray maqaal ku soo baxay wargeyska the Washington Post.
Wali meydkiisa meelna laguma sheego, iyadoo Yasin Aktay oo lataliye u ah Madaxweyne Erdogan uu sheegay in uu rumaysan yahay in maydka ninkaasi lagu baabi’iyay aashito kaddib markii jirkiisa la jarjaray.
Dilka oo markii hore ay qariyeen mas’uuliyiinta Sucuudiga ayaa waxa uu dhaliyay dhibaato dhanka diblumaasiyadda ah oo ka dhex aloosantay Sucuudi Carabiya iyo xulafadeeda.
Waxa uu ka cowday in aanan wax tallaaba ah laga qaadin qunsulka guud ee Sucuudiga, kaas oo Turkiga isaga tagay, waxa uuna dacwad oogaha guud ee Sucuudiga ku eedeeyay in uu ku guuldarraystay inuu la shaqeeyo dambi baarayaasha “isagoon weliba ka jawaabin su’aalo iska fudud”.